Tanora · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Janoary, 2019
2018 manerana an'i Afrika atsimon'i Sahara: Ireo tantaran'ny fiovana sy ny fanovana nankafizinay indrindra
Afrika Mainty25 Janoary 2019
Taorian'ny volana maromaro nanaovana fanerena tamin'ny fitondrana tao Afrika Atsimo sy i Ethiopia, dia nametra-pialàna ny filoham-panjakana Jacob Zuma sy Hailemariam Desalegn. Niteraka fanantenana mankany amin'ny fanovana demaokratika ao amin'ny firenena Afrikana maro misy mpitondra mpanao ampihimambam-pahefana ny fianjeran'i Zuma sy Desalegn.
Tonga ao Maraoka ny “Diaben'ireo vehivavy ratsy fitondrantena”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Janoary 2019
"Miarova tena samirery, takio ny fanajàna. Tsy maintsy miova lasy ny henatra !" io no hikam-pitoloman'i Majdoline Lyazidi, tovovavy iray 20 taona namorona ny SlutWalk Maroc, pejy Facebook natokany hanairana ny saina amin'ireo fanorisorenana ara-nofo ao anatin'ny fiarahamonina maraokanina.
Azia Atsinanana14 Janoary 2019
Lazain'ny toerian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny tsirairay fa hoe azo aminaniana mialoha ny maha-izy ny olona sy ny fahaizany mifangaro amin'ny hafa ny sokajy misy azy Ao Japàna sy Korea Atsimo no tena malaza be io finoana io. Idiran'i Yoo Eun Lee lalina ny momba ny tantaran'ity teoria ity.
Dimampolo taona taorian'ny hetsik'izy ireo tamin'ny 1968, tohizan'ireo Meksikàna mpianatra ny dian'izy ireo anoherana ny herisetra sy ny tsimatimanota
Amerika Latina14 Janoary 2019
"Zafikelin'ny 68 izahay". [...]misy andro, herinandro, volana izay afaka mahafehy taona marobe [...]
Azia Atsinanana11 Janoary 2019
Nahavory ireo bilaogera sangany sy mpisehatra aterineto avy amin'ny lafivalon'ny firenena ilay Twestival Brunei voalohany ho fanohanana ny Ivontoerana Fampivoarana ny Ankizy, vondrona iray izay manome fanohanana ho an'ireo ankizy manana filàna manokana.
Malawi: Fanehoankevitra momba ny fananganan-jaza faharoa an’i Madonna
Malawi11 Janoary 2019
Hahita ity firenena Afrikana ity ireo izay mbola tsy naheno mihitsy momba an’i Malawi, noho i Madonna fotsiny ihany, izay tsy mahafantatra ny anarany feno ny ankamaroan’ny olona. Toa faly ny ankamaroan’ny Malawita, mahita ireo ankizy mahantra natsangan’i Madonna, na dia eo aza ny ahiahy mety haterak’ity zava-miseho ity.
Kroasia, Serbia : Sainan'ny fisakaizàna
Eoropa Afovoany & Atsinanana04 Janoary 2019
Mba ho tandindon'ny fampihavanana ny firenena roa tonta dia namorona saina nampitambarana ny an'i Serbia sy Kroatia ny tanora roa avy amin'ireo firenena roa tonta ireo. Marobe ireo Serba sy Kroaty mpisera amin'ny aterineto no naneho hevitra tamin'io vaovao io, ny sasany manameloka, raha ny hafa kosa nankasitraka.
‘Atsaharo ny famonoana anay vehivavy’ — fanentanana vaovao manohitra ny herisetra an-tokantrano ao Angola
Afrika Mainty04 Janoary 2019
Tena misy ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, tena misy tokoa. Tsy zavatra ao an-dohan'ireo mpiaro vehivavy izany, tsy zava-poronina na kabary tsy misy dikany: TENA MISY IZANY!
Ejypta: Tantaram-pivarotana iray
Najanon'ny bilaogy iray aho androany ary voasarika avy hatrany tamin'ny fomba namaritan'i "Tak Hank" (Ar) ny fizotran'ny fiainana amin'ny alàlan'ny tantarana fivarotana kely ao amin'ny faritra misy azy.